I-Coronavirus, uluntu olwenza lukhuni okanye luzuze ubuntu? : UMartin Vrijland
Ngokucacileyo i-coronavirus izisa ubunzima obukhulu eluntwini. Unokubona ukuba kuko konke ukuhlaselwa kwimidiya yoluntu kuye wonke ubani ozimisele ukuveza uluvo olwahlukileyo. Ungenzi mpazamo. Kule minyaka ingaphezulu kwesixhenxe ndiyibhalileyo, ndiye ndafumanisa ukuba inani lamajoni aseburhulumenteni amdubula kwi-bullet zekhibhodi ebantwini kumajelo eendaba ezentlalo likhulu kunenani lamajoni awayenxibe imipu. Ukoluhlu lwabahlobo bakho nje kwaye banemisebenzi enesithunzi ebonakala ngathi ayihlawulisi kakhulu, kodwa banokufumana kakuhle kwaye ngoku bachitha ixesha elininzi emva kwekhibhodi yabo. Ngaba banayo iga evela kurhulumente? Ukugcinwa kwesibonelelo, isivakalisi esinciphile?
Xa uyifundile incwadi yam, ufumanise ukuba eyona nto siyibonayo ichukunyiswe ngamandla zezi zixa zininzi zabantu esele zithotyelwe kwaye sele zisetyenziselwe ukuhlawulwa ngurhulumente, njengoko kuzakuba njalo emntwini wonke. Kwilizwe lobuKomanisi bobuchwephesha ngoku elaliswayo. Kwindawo yangaphambili ye-GDR phantsi kweSoviet Union, ngaphambi kokuwa kodonga lwaseBerlin, umntu om-1 kwaba-50 kwaba ngu-Inoffizielle Mitarbeiter (IMB). Ngaba ngokwenene ucinga ukuba le nkqubo ibinokuthi inyamalale kwikhomethe yodaka ukuba iphumelele? Jonga okuhle ngeenxa zonke kuwe.
Wonke umntu uye wabona isiphumo esibi sengxaki yekoronavirus. Ngaba urhulumente unamashumi amawaka ezigidi afumanekayo ngaxeshanye ukuze athathe imivuzo, ancede amashishini asweleyo, kwaye ahlawule irhafu yokubuyisa? Inokwenzeka njani loo nto? Iminyaka, austerity iye yatyalwa kwaye ngoku impompo inokuvulwa ngequbuliso! Siyangqina ngokufihlakeleyo ukwazisa komvuzo osisiseko (njengaphantsi kobukomanisi). Ingeniso esisiseko leyo Inoffizieller Mitarbeiter inokuba wayeyonwabele ngasese ixesha elide.
Uncedo olungalindelekanga lwesibonelelo sikarhulumente mhlawumbi sivela kwi-750 yezigidigidi imbiza ukuba I-ECB iphinde yashicilelwat sinayo. Nangona kunjalo, kukho enye imbiza.
Emva kwekota yesine ka-4, i-2019 yeebhiliyoni zee-euro kwi-pension capital yayikhona kuzo zonke iingxowa-mali zomhlalaphantsi. Iimali ezinkulu zepenshini zibandakanya i-ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds), PFZW (Pensioenfonds Zorg en Welzijn), PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek), PBF BOUW (Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouonionddondsondsiden na dortevensonddort. Ngokudibeneyo babenokulinganiselwa I-909 yeebhiliyoni imali etyalomali. Iimali zepenshini kunye nabanye abatyali mali beziko babonelela ngeyona mali yokuthengisa kakhulu kwi-Amsterdam stock exchange.
Ezo mali zepenshini ziye zathwaxwa kanobom ngokuncipha kweemarike zesitokhwe ngexesha lale ngxaki. Ndicacisa ngokweenkcukacha ukuba le mvuthu-mbimbi yayiza kuza eli nqaku.
Amajelo eendaba ngoku anika ingxelo yokuba akusekho mali eyoneleyo endlwini yokuhlangabezana nazo zonke izibonelelo zepenshini abathembise ngazo abathathi-nxaxheba bazo ngoku nakwixesha elizayo. Umyinge ophakathi wokufumana inkxaso-mali wehle ukusuka kwiipesenti ezili-29 ukuya kwiipesenti ezingama-101 ngeentsuku ezingama-95 (iLanga. UTrouw uxeliwe sele ngoMatshi 2). Oku kuthetha ukuba zingama-95 iisenti eziinkozo ezinkozo zepension nganye echaziweyo. I-ECB ngoku inika iipakeji zenkxaso ye-QE (Ukunciphisa ubungakanani) iminyaka. Iinkampani ezininzi zikwazile ukugcina amaxabiso azo ezitokhwe aphezulu kakhulu, kuba bekwazile ukuboleka imali phantse ngenzala ye-zero kwaye ibhanki ephakathi ilibuyisele ityala. Logama nje uthenga izabelo zayo, loo mali ayizukungena kwintengiso, kodwa iya kuhlala ingumqolo wabatyali beziko.
Ngoku ukuba ilizwe laseDatshi liphonsa amashumi ezigidi kuluntu (oluvela kwi-ECB), le mali iphelela eluntwini. Emva kwayo yonke loo nto, inikezelwa njengenkxaso kubantu abaya kuthi kungekudala bathenge ukutya kunye neziselo. Ukuba uprinta amashumi ezigidi njenge-QE kwaye oku kuyaqhubeka ukujikeleza kubume bezimali bezemali, kunefuthe elincinci kwixabiso lemali kubomi bokwenyani. Nangona kunjalo, ukuba utyhala amashumi ezigidi kwaye unika abantu, oko kunokukhokelela kwi-hyperinflation. Oku kuthetha ukuba inkxaso ethembisiweyo isengaba sisiqabu kwabaninzi kwaye abanye bayonwabele imvakalelo yeholide yokuhlala ekhaya, kodwa oko akusekho mnandi emva kweveki e-1. Xa amaxabiso enyuka, ngesiquphe uba nzima ukuzalisa enye ingxowa yokutya kunye nokondla imilomo.
Andizukumangaliswa kukubona i-nationalization yeemali zepension. Ngokuqinisekileyo ngenxa yenyani yokuba iimali zepenshini zikwibhondi zikarhulumente (izikhuselo zamatyala) kwakhona kwaye ukuba urhulumente ufumana imali kwi-ECB, ziye ziphinde zixabiseke kwakhona.
Ndicinga ukuba sisemva kwexesha lotshintsho olupheleleyo, sisuka (ukuya kuthi ga ngokuchasene nam) inkululeko yedemokrasi ukuya kulawulo lobukomanisi bethekhnoloji (inkqubo yolawulo lwedijithali). Kukhethwa ukuba kwenziwe indawo ephakathi. Yonke into ebesisazi ngayo ngaphambili iya kutshintsha (kubandakanya ipenshoni). Iinkampani ziya kufakwa kuzwelonke, hayi ngokuthe ngqo, kodwa inyathelo ngenyathelo kwaye wonke umntu uya kufumana umvuzo osisiseko. Ingeniso esisiseko inokuqinisekiswa kuphela ukuba kukho ukuseta okugcweleyo kwenkqubo yezemali yehlabathi kwaye ikwachazelwa kule nto. E-US, sabona uDonald Trump ebhengeza amanyathelo afanayo izolo njengoko athathwe apha eNetherlands. Lowo ngumqondiso eludongeni.
Ukuba ufuna ukuqinisekisa ngengeniso esisiseko ngaphandle kokuba ingeniso ibe ingenamsebenzi ngenxa yoxinzelelo, kuya kufuneka uphelise intaba enkulu yetyala lemali eprintiweyo. Kwaye unikwe ukuba iimali zepenshini zibambe iimali ezinkulu zokugcina amatyala kurhulumente waseDatshi, imali eyinkohliso kwiingxowa mali iphelile.
Ngoku andazi nokuba ukucinywa okunje kwamatyala onke kuya kwenzeka, ngoba ke kuya kufuneka ukuba ujongane nenkqubo yonke yebhanki kunye nezezimali kwihlabathi liphela. Ekugqibeleni, nangona kunjalo, ndiyakholelwa ukuba umsebenzi uqhubela kwinkqubo entsha yezemali yehlabathi.
Kulula ukwenza iodolo entsha ngaphandle kwesidubedube esipheleleyo. Kwaye ezo ngxaki ziya kuba nkulu. Siza kuqala ukungqina ukuthathwa kwengxowa-mali yepenshoni ngurhulumente waseDatshi. Ngapha koko, ukwenza ilizwe lifumane ingxowa mali yepenshini ayisiyonto ingaphezulu kokuthenga imali eninzi eprintiweyo ngeapile neqanda, kodwa ke inani elikwingxelo yakho yobutyebi lingaphezulu nje kwamakhulu ezigidi zezigidi kwaye unganikezela ngaphezulu.
Ukusika ibali elide elifutshane: Ndiyakholelwa kwi-hyperinflation yeyona nto iya kuthi igxothe abantu base-Datshi eluvalelweni lwabo. Ukulamba!
Sisadlalwa ngamajelo osasazo kunye nabezopolitiko abadubula iividiyo zabo nabantu abahlelelekileyo (Inoffizieller Mitarbeiter, IMB'ers) ekucingelwa ukuba bangagcini kumgama we-1.5 yeemitha ukuze kuveliswe i-alibi endiyichazile kwiiveki ezimbini: I-coronavirus iyaphuma ezandleni "ngenxa yokuba siguqeke kakhulu" ke ngoku kufuneka siye kuvalwe nzima ngakumbi kunokuba kunjalo eFrance naseSpain..
Oko kutshixa okunzima ke kuyathengiswa ebantwini. Okwangoku, siya kuxelelwa ukuba kunjalo i-coronavirus mutates kwaye ukuba konke kuyingozi ngakumbi. Ke ngoku sizifumana sikwimeko apho umntu ngamnye esoyika umntu wakhe nokuba umntu odibana naye angakubulala. Ke, nabani na ohamba ngokukhululekileyo uba ngumntu onokuthi "afe ngesazela" ngumbulali omkhulu.
Khawufane ucinge ngemeko apho kukho ukungasebenzi kakuhle kumaziko okusasaza kwemixokelelwane yentengiso. Khawufane ucinge ukuba iiATM azisavunyelwa ukunika imali (ngenxa yomngcipheko wokosulelwa yile ntsholongwane isasazekayo) kwaye khawucinge ngehyperinflation, apho isithembiso sikaRutte sokufumana umvuzo osisiseko sikufumanela nje isonka esinye ngeveki kunye nengxowa yeetapile. Kuza kwenzeka ntoni emva koko? Ke abantu balamba emva koko bayaphuma ezindlwini zabo. Ke abamelwane babo baya kubazisa, kuba abo bahamba ngebhomoni yexesha elizayo bayingozi kubo kwaye bayazi bonke. Kwaye emva koko umkhosi kufuneka ungenelele kwaye siza kubona ukuba abantu abaninzi banyamalala. Asiyonto eyoyikisayo leyo, ukucinga oko kusengqiqweni.
Kwaye ke sibona isiphithiphithi eYurophu endisoloko ndiyilindele. Kwaye apho kulawula isiphithiphithi, kukho amandla amatsha ahlaselayo ukubeka izinto kulungelelwano. Niyalazi ilizwe endikuyo ibonwa kusengaphambili iminyaka. Yonke iscript esichazayo kwaye ndiyichaza le script ebalaseleyo kwincwadi yam. Ukuba ukhe wayifunda le ncwadi kunye nezinto ezongezwe kuloo ncwadi apha kule ndawo, uyazi ukuba likho ithemba. Kodwa oko kuthatha ubunzulu. Ukubona okwenzekayo kuyinyani kwaye kulungile. Emva koko uzilungiselele kwaye uyazi ukuba kweliphi inqanaba ongayenza into.
Uludwe lwekhonkco lovimba: nos.nl, trouw.nl, trtworld.com
tags: umgama, enye enesiqingatha, umvuzo osisiseko, coronavirus, eziziimbalasane, ukunyuka kwamaxabiso, Amazing, imitha, Rutte, inkxaso
23 Matshi 2020 kwi-10: 10
Ukongeza kumajelo eendaba ezentlalo, apho wonke umntu (otyholwa) elumkisa ukuba akukho mntu uthatha uxanduva lwakhe kwaye angalandeli imiyalelo "yezoluntu", Iphepha-ndaba lizele zizilumkiso kwakhona namhlanje.
Ingcaphephe yeetelegrikhi yokutyabeka, iintloko ezimi ecaleni namhlanje iintloko: UKUQHUTYWA KOMNYANGO ”. Oosodolophu kunye nabaphembeleli balumkisa kwaye bahlwayele ukothuka ukuba iNetherlands iyabutyeshela kakhulu imiyalelo yomkhuluwa, njl njl.
Abantu balungiselela ukuvalwa ngokupheleleyo kwaye iyimpazamo yethu yonke.
Yintoni emangazayo (ndicinga ukuba yinto engaqhelekanga) ukuba mna kunye nesangqa sam sabahlobo (ndinesangqa esikhulu sabahlobo) andazi nabani na okhe wanayo okanye okhe wanayo ikorona, yonke into ivela kwiphephandaba, iNieuwsuur, kwi-YouTube.
Kuyamangalisa ukuba uninzi lwabantu abadumileyo kwihlabathi liphela bane-corona, (ngokuqinisekileyo abayilo mpembelelo indlela endicinga ngayo) kubonakala ngathi intsholongwane inaliso kubantu abadumileyo (abezopolitiko, amagcisa, iimvumi, iinkwenkwezi zemidlalo bhanyabhanya kwaye singasathethi ke ngokudumileyo iimbaleki).
Ndicinga ukuba oku kuqhelekile kwintsholongwane ye-corona ndicinga ukuba iyacalucalula, kutheni kuphela abantu abadumileyo?
23 Matshi 2020 kwi-10: 40
Ubufudula unamalungu e-NSB .. Ngaba ngoku sinamalungu e-IMB?
23 Matshi 2020 kwi-11: 24
Ukuba ujonge kakhulu, ngokwenene angamalungu e-NSB. Oku kungachaza ukuba kutheni baninzi kangaka abantu abalolu hlobo eNetherlands kwaye kutheni kulula kakhulu ukuba urhulumente olapha ahlanganise abantu abonwabise, kwaye oko akunto nemali.
KwiMfazwe yesibini yeHlabathi, amaJamani ngamanye amaxesha ayekhalaza esithi amaDatshi ayenenzondelelo enkulu ekuncedeni nasekungceleni abantu bamanye amazwe. Abanye bakhalaza ngelithi ngenxa yoku banomsebenzi omninzi kwaye bebexakeke kakhulu ukuba bangaqhubeka nokuchola abo bangcatshi.
AmaDatshi (ayingabo bonke kodwa) ane-streak enomona kakhulu ngaphezu komzekelo amaJamani, amaBelgiya kunye nesiFrentshi, phantse abaniki omnye umntu ongumDatshi ukukhanya emehlweni, ngoko yintoni enokuba ngcono kunokuba ungcatshe abantu bakowenu kunye noku kwakhona umvuzo omnandi wokufumana imali, ndiyakrokrela ukuba kunokuba kubekho uluhlu lokulinda lwabantu abafuna ukuba yi-IMB.
23 Matshi 2020 kwi-10: 18
Esitratweni kumgama okude ndabona isibini sibambene ngezandla kwaye siqabulana (kungekho nto iphosakeleyo ngayo) njengamajuba enza, inkwenkwe nentombazana.
Umfazi udlulise esi sibini kwaye ndimva esitsho, ungayeka lonto kwaye lomfana wesi sibini wothuka wabuza ukuba kuqhubeka ntoni. Watsho ekhwaza, "uyazi ukuba bekungafanelekanga ukuba uphambene." Inkwenkwe: "ma'am thula, akukho nto igwenxa". lo mfazi waba nesidima kwaye waqalisa ukuthuka, inokuba sele ikhutshiwe ngaphandle kwesandla, isibini sathi cwaka ngokuqhubekayo kwindlela yabo, umfazi wema ngxi.
Nika ingqalelo kancinci omnye komnye
23 Matshi 2020 kwi-11: 16
Isiphumo se-mith smith esisebenzayo, okanye ngubani owaziyo, la manenekazi alilungu le-NSB yanamhlanje (eyaziwa phantsi kwesihloko esisebenzayo kwi-inofficieller mitarbeiter).
23 Matshi 2020 kwi-11: 07
Iibhanki zivaliwe kwisixeko sam namhlanje (uvavanyo luqhutywa? Ukubona ukuba abantu basabela njani)?
Ndilindele amanyathelo kwiiveki / kwiinyanga ezizayo ebezakufuna isixa esikhulu se-Hegelian dialectics ngaphambi kokuba abantu babe bekulungele ukuzamkela.
amanye amanyathelo ndibona (andazi ukuba ayenzeka na kodwa ndicinga ukuba anganakho) kunye neziphumo zazo ezinokwenzeka:
1) Umda wepini ngekhadi ngalinye ngosuku / ngeveki, umzekelo, i-50 euros. (kudala uloyiko
I-2) okanye ii-AMs ezivula kuphela amaxesha amancinci ngemini / ngeveki (zidala isiphithiphithi kwaye ziqhela ukwenza Cashless)
3) ukwazisa (okwethutyana kunjalo, kodwa kule mihla kuyindaba yeendaba ezisisigxina) ukuziswa kwengeniso esisiseko
I-4) ukungeniswa kwengeniso esisiseko yokunyuswa kwerhafu okwethutyana kuya kukhokelela, umzekelo, iipesenti ezingama-90 kubantu abancinci be-SME / abasebenza ngokuzimeleyo abasaphumelelayo kwaye bafumana imali elungileyo okanye abo, ngokwezikhundla, benza inzuzo kwiingxaki.
I-5) Ukunyeliswa koosomashishini abathi baxhakamfule ingxaki kwaye bafumane imali kuba babenobuchule bokuza nemodeli yokufumana umvuzo kule corona hype. (Ndibona oku kusenzeka kakhulu kumajelo eendaba ezentlalo kunye neziza zephiko lasekhohlo)
I-6) Ukulwelwa kwesizwe kweengxowa-mali zomhlalaphantsi kunye nemizi-mveliso. (Ii-SME kamva ziye zabethwa ngothintelo kunye nokunyuka okukhulu kwirhafu (ebizwa ngokuba yimali yobumbano yexeshana) ukuba bonke baya kubhengezwa, kubandakanya nezo zinkampani zisenza imali entle nangona kukho intlekele.
I-7) i-multinationals ikhula kakhulu kwaye inamandla amakhulu, imarike yesitokhwe iyawa ngokupheleleyo. iinkampani zotshintshiselwano ngesitokhwe zenziwe kuzwelonke (kucingelwa ukuba zingezizo okwethutyana) ngoorhulumente kwaye zithengiwe zibuyiswa zizinto ezenziwa ngabantu abaphambili (ukuba ibingekho sele zisezandleni zabo).
8) Ukuqaliswa okukhawulezileyo kwe-5g kwihlabathi lonke kufanelekile ukuba kukhuseleke kunye nokukhusela ukuqhambuka kwentsholongwane okulandelayo.
23 Matshi 2020 kwi-12: 15
Xa imali yepenshini ikwenziwa kuzwelonke, ukungqengqiswa kombuso kuya kufakwa isitampu. Le yindlela yokunciphisa ityala likarhulumente. Sele sikubonile oku kwilizwe elifana neHungary, apho iingxowa-mali zepenshini zabucala zikhutshiwe kwaye amatyala orhulumente (ahambelana ne-GDP) ancipha ngoko nangoko. Umzekelo, urhulumente uza kurhoxisa inxenye enkulu yamatyala abo, ekunokwenzeka ukuba kungcono ebhankini kunokuba ayivumele inyamalale ngokwenyuka kwamaxabiso. Le yokugqibela kuba iibhanki azifuni ukuba abo banetyala lemali mboleko ukuba bakwazi ukuwahlawula amatyala abo ngale ndlela. Ipropathi iyakuphelelwa ngenxa yokungabhatalwa mali yobambiso ngenyanga yenzelwe iibhanki.
23 Matshi 2020 kwi-13: 33
Ukuba abantu abasenakho ukuhlawula iimali mboleko zabo, iibhanki ziya kuthimba.
Ukuba iibhanki zenziwe kuzwelonke (jonga i-ABN AMRO), ke urhulumente uyakuzithwala kwangoko zonke ezo zindlu ... ubugcisa bezonxibelelwano ekwenzeni
23 Matshi 2020 kwi-13: 07
kulo Lwesihlanu uphelileyo bendithetha nomntu obalekileyo wase-Afghan ocebisa uqoqosho lwase-Datshi njengosomashishini. Uxelele ngomhlobo olungileyo eTshayina. Lo mhlobo uhlala yedwa nosapho (umfazi nabantwana abathathu) kwiinyanga ezi-2,5. Bafumene uhlobo lwevawutsha kurhulumente. Umntu om-3 wekhaya uvunyelwe ukuba ayothenga yonke imihla. Ukwenza ingxelo kufuneka kwenziwe kuhlobo lokuhlolwa kwangaphambili. Umthetho osemthethweni ngomnxeba kunye nevawutsha. Iivenkile ezinkulu ziyajikeleza xa kuvulwa, kodwa zivulwa kuphela 1. Ndibuze ntoni ngomsebenzi wakhe (kumzi-mveliso wokuthunga). Ngethamsanqa loo nto nayo "yasonjululwa". Irente kunye nombane akusafuneki ukuba kuhlawulwe, abasebenzi babehlawulwa ngurhulumente ukuba bathenge ukutya.
Emva kwexesha xa ndandisekhaya, kwaye ndabuya kulwazi, imibuzo emininzi endandifuna ukuyibuza. Nangona kunjalo, ithuba lokuba ndikwazi ukunxibelelana naye ngokwakhe kule veki izayo iyancipha imihla ngemihla.
1 = ayikho
enye = ayikho
Ukuba ubuza imibuzo efanelekileyo, ngakumbi imibuzo efuna inkcazo ebonakalayo yekhosi yemihla ngemihla yeziganeko / umbono, umfanekiso omkhulu uza kubonakala ngokuzenzekelayo. Kwaye ngaba kulula ukwenza isigqibo ngokuqonda ukuba ngaba kukho ukunyaniseka okanye ubuqhophololo bokwenyani
Biza i-zzpers ngoku ababhalise kwi-masse ngoncedo lwemali. Umthetho wokuThatha inxaxheba usasebenza. Fumana imbuyekezo = yenza umnikelo. Ukuba akukho msebenzi wokukhetha, ngoko kuya kubakho ingqesho. Le yimodeli yengeniso ... ukusuka kumaxesha angaphambili, inkqubo ye-feudal okanye iwayini entsha ezingxoweni ezindala?
Fumana uncedo lwezomthetho? Le yinto yangaphambili. Iinkundla ezingaphantsi (zembambano) zivaliwe kude kufikelelwe kwesinye isaziso.
Sonke simnye, bamba i-drift yam, i-notch wink wink say more
Nangona kunjalo, incopho yentwasahlobo ikhona. Kuba nathi sathathelwa ngeempumlo. Indalo isahlala kwiiveki ezi-6 phambi kwethu, ikhalenda iiveki ezi-6 emva. Jonga umsebenzi we-Itsjing / jaap voigt kwaye uphile ngokwamaxesha
Landela indalo kwaye uyindalo yokwenene! Kwiwadi (kwiwadi) kunye neewadi (kwiwadi) ngaphandle ....
Setha kwakhona engqondweni!…. Ukuba usafuna ukubonelela ngo “ncedo”…
marijke wabhala wathi:
24 Matshi 2020 kwi-05: 36
UMartin:…. “Ivelaphi le mali ?? `
Ngaphandle kokuba uninzi lwabadla umhlala-phantsi ngoku bayasweleka, kwaye imali yabo yepenshini kurhulumente inyanzelwe
kwaye ke iimbiza zepenshini ziyaqhuba ngokuzele (banokuhlawula izinto ezininzi….)… .is
kukho enye into eyenye: Ngokuqinisekileyo ndifunde malunga ne-10 (!) eyadlulayo eyokuba ezo ntsapho zityebileyo (ezibizwa ngokuba yi-Illuminati, iRothschilds, iRockefellers njl njl. njl.) zigcinwe zingu-2 0 0 ISIGIDIYO ngaphandle kowe-2 0 0 7! Kuba banendawo yokudibanisa engaphezulu kwe-8 5 0 YENGXENYE (ngoko kuqikelelwa, mhlawumbi ngaphezulu ngoku) unokucinga ukuba aziphoswa zizi-200 zeetriliyoni zizonke. I-200 yezigidi zezigidi njengebhanki yengulube yayiza kuthatha umhlaba uphela, okwenzeka ngoku. Kwakwinqaku elinye, endingenamsindo ukuba ndingenalo unxibelelwano, kwakusithiwa yonke impahla yabantu abangaphandle kwezi ntsapho, umhlaba ke uqikelelwe kwisigidi ezingama-40 kuphela. Ukukhanyiswa ke kunamaxesha angama-2 isixa semali, njengoko umhlaba uphela ungamawaka asixhenxe ezigidi.
I-2 0 0 trillion, ukuba ungumnini we-850 trillion ke kukukhathazeka. I-2 0 0 trillion ingama-200 ane-18 zeros, kunjalo ke: 2 0 0 bhiliyoni x billion. Kwakwelo nqaku linye kwakusithiwa kulo mbiza, kweli xesha lokuthathwa, umntu uyakuhlawula phantse yonke into engenamkhawulo BONKE oorhulumente bamazwe onke, YAYE KUFANELE UKUhlawulwa ngantoni? Ugxininiso lubekwe kuloo nqaku
`kuthathwa`, HAYI into ebiza kuyibiza. Eyona njongo iphambili yayikukuthathwa
kwaye imali ibingabalulekanga.
Inqaku lisenokufumaneka, kodwa uxolo ngokungabinayo ikhonkco, kudala kakhulu. Ngokuqinisekileyo kuya kubakho abagqabazi abakhumbula eli nqaku?
« Xa kufika ukuvalwa kwe-coronavirus iyonke kwaye ijongeka kanjani: izithuba zovavanyo kunye nomkhosi
I-Bill Gates 'yenani lamachaphaza' ikhadi lesazisi engenazingcingo esigcina ujonge ukuba ingaba unayo i-coronavirus nokuba ukhe wagonywa na. »
Iindwendwe ezipheleleyo: 1.220.286
Abderrazak Samir op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
UMartin Vrijland op Ngaba amadoda angatshatanga abalingane abona bantu kujolise kubo kwi-coronavirus? Isiseko sesayensi
UMartin Vrijland op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
Killumimati 777 op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?
iifom op I-Coronavirus, Q Anon, iTrump, iBolsonaro, iBoJo, indawo enzulu kunye nokuvalwa kwe-intanethi ngo-Epreli 1?